Idivayisi kwanoma iyiphi imoto enikeziwe Clutch. Lolu hlelo kuveza inkinobho bushelelezi ngaphakathi nangaphandle kwe-amagiya, ekukhiqizeni ukudluliswa torque engu kusukela ligcina uthi lokuphotha luzungeza amasondo. Banakekela lokhu kubaluleke zonke futhi bamba inceku isilinda. UAZ "isinkwa" ubizwa nangokuthi ifakwe kubo. Esihlokweni lanamuhla sizobheka kuyini into umsebenzi ukwenza kwaso indawo kanye ukulungiswa.
Ngokungafani izimoto phambili isondo, ezine-wheel drive izimoto UAZ "Patriot" inceku isilinda bamba (ukuhlela ke - ekupheleni isihloko) kuyinto wokubacindezela futhi ilawulwa ingcindezi uketshezi, hhayi intambo. Ukwakhiwa kwalesi sakhi kuhlanganisa izingxenye eziningi. Ziyakwazi:
Ezezindlu. It is eyenziwe ngepulasitiki noma lwensimbi.
Piston (induku ezisebenza).
A valve ekhipha umoya lapho ukopha uhlelo bamba (ukulungiswa).
Uphawu izindandatho. Bona akhiwe ngerabha okuhlala.
Pusher. Yena kuthinta entweni eyedlule.
Indlela ukusebenza bamba inceku isilinda? UAZ "Patriot" ophethe ngosizo hydraulics. Ngokuchofoza isinyathelo bamba kuya piston ucindezelwa induku yensimbi. Ngokulandelayo, uketshezi sidlula yamapayipi, ashukumisa a isilinda senceku. UAZ "Hunter" ine backbone aluminium, okuyinto esikhundleni phezu iraba emalungeni. Ngaphansi kwethonya umfutho ophakeme piston induku kudedela eziveza ukukhululwa. sinqanyuliwe Ngakho ukudluliswa torque kusukela injini gearbox. Lapho isinyathelo ikhishwe bamba inceku isilinda (UAZ-469 iyathinteka) waphinda lebhokisi akwazi ukugcina bamba. Torque ukudluliswa ukubuyiswa. Kuyaphawuleka usability isimiso esinjalo. Kuqhathaniswa ukukhululwa ikhebula, lokhu isinyathelo kuba lula. I disc ixhunywe ngobumnene futhi ngokushelela. Gqoka pads omncane.
Kanjani ukuba siqonde lokho imoto idinga ukushintshwa bamba inceku isilinda? UAZ - imoto ezithembeke kakhulu, kodwa le nto ingase ezilimele. Nquma umonakalo kungaba ngezizathu eziningana. Okokuqala, it is a ukwehla elibukhali ezingeni ketshezi ethangini. Uma kukhona ukuvuza, okungenzeka ukuthi isendleleni zibhonge uMbhalo. Futhi, umonakalo ongase athinte amashubhu zenjoloba noma aluminium. Hlola ubuqotho babo. Okwesibili, isinyathelo iba ethambile. ISidlo "ukwehluleka bamba." Lokhu kubonisa khona emoyeni ohlelweni. Yena engafinyelelwa kuphela umonakalo mechanical noma anther zomzimba. Kulokhu-ke kuyadingeka ukuba balungise ngokwengxenye noma ngokuphelele ukushintsha bamba inceku isilinda. UAZ lapho kwehluleka futhi sishintsha isinyathelo. The bamba ekhululwa khona futhi isibambo wake ephansi, futhi inkinobho ukudluliswa wenziwe phakathi nesikhathi esifushane. Ngokuvamile, kulesi simo iphutha kwenzeka entwasahlobo ukubuya. Kwanele bazilungisele umshini, ukuthenga ikhithi ukulungisa. Lihlanganisa izici eziningana ezinjengolwazi cuffs, induku, isiphethu, ngesivalo, indandatho uphawu.
Njengoba ezothatha isikhundla kusezandleni zakho
Okokuqala, udinga sokukhipha ketshezi ezisele ohlelweni. Lokhu kungenziwa ngokusebenzisa isipetu. Lo msebenzi kuyadingeka ukuze uyokuhlanza asuse inhlabathi wokubacindezela drive uhlelo. Kwamanye tinkhulumo, ukufinyelela kungaba avaliwe ukunwetshwa ithangi kohlelo indlu. Ukuze kube lula, susa ngezikulufo obandayo futhi asuse umthamo hose. Unscrewed kufanele kube isihluthulelo 10. Okulandelayo ahlukanisa tube lensimbi ukuthi isuka bamba master isilinda. Kungaba ithusi noma aluminium. Ngemva kwalokho, athathe master isilinda, ngaphambili kokukhipha ukhiye nati 13 ezimbili esaziwa. Lapho umqhele 17 Kuyadingeka ukuba asuse hose ukuthi isuka uMbhalo ukusebenza. Ngokulandelayo, sidinga ukhiye futhi nganoma 13. Ngosizo lwawo, thina uyasikrufulula ngezikulufo ezimbili ukuthi uvikelekile bamba inceku isilinda. UAZ ngimi hlangothi. Wona ogibele ukudluliswa izindlu uMbhalo ukusebenza kule moto. Ukuvimbela umonakalo kwezinye izingxenye, nqamula ngokucophelela ipulaki kusukela plunger. Uma amapayipi amanzi ziyasuswa "okwesikhashana" (ngamanye amazwi, kuseli ethumba), uMbhalo ingalungiswa esebenzisa isikrufu ngakolunye uhlangothi, futhi ngakolunye - uyasikrufulula izimpawulo tube. Kodwa qaphela, kusukela mechanical umthelela iraba lungaqhekeza.
Ngakho, into isuswe futhi isilungele disassembly. Okokuqala Vala umphini ngoba kufuneka uveze ukukhungatheka futhi athathe ukhiye indandatho. Ngemva kokuqeda izingxenye ahlole isimo zonke izakhi - iziphethu, piston, push induku rubbers uphawu. Akumelwe ube ngokuphelele noma yimiphi iminonjana umonakalo lokukhanda. Okulandelayo, geza ingaphakathi element. Kwenze ngosizo uketshezi nolaka ezifana uphethiloli kanye diesel akudingekile. Gcwalisa isipetu yezokwelapha uketshezi wokubacindezela kanye Umfutho ukungcola ahlanzekile therein. Uma umonakalo bendawo kuphela, ngokuba yokutakula, sidinga kit ukulungisa. Kuyaphawuleka ukuthi ngisho nge ezilimele ingxenye washintsha zonke izakhi wonkana, noma ngabe lilethwa gum noma isiphethu zibhonge. Lokhu kuzokhulisa impilo uMbhalo ukusebenza.
Uma ungakwazi ukuthola i-?
Kwezinye izimo, ukukhanda ngeke unike umphumela. Ukushintshwa uMbhalo ukusebenza wenziwa esimweni ukulimala igobolondo (khona ukuqhekeka), noma isizukulwane esikhulu kuwo. Lesi sakamuva kungenzeka kubangelwa induku okuyiphutha noma engaphelele. Uma noma iyiphi yalezi amaphutha bamba inceku isilinda Oise washintsha uhlobo olusha obelungekho. Izindleko isici ruble amahlanu noma ayisithupha. Kancane ezibizayo iyona bamba master isilinda - 750 ruble. Kit angathengwa ngentengo ruble 150 200. Inani akuyona umxhwele, ngakho isikhathi esilinganiselwe kungcono esikhundleni izito inhlangano entsha. Ngemva bamba inceku isilinda ifakiwe, UAZ kudingeka "futha". Ngakho thina uzoqeda bonke emoyeni emaphaketheni ekhona imigqa futhi ulungise isinyathelo travel evamile.
Ngemva element omusha kumelwe sisetshenziselwe wokubacindezela uketshezi ukufakwa yimpumelelo nasemhlanganweni. Isebenzisa efanayo uhlelo ukubopha. Ngemva kwalokho, uyasikrufulula valve emoyeni we ukusebenza isilinda a ematfuba ambalwa bese ucindezela izikhathi 5-7 the isinyathelo bamba. , Umsizi wekholi, eziyobusiswa akhishwa ohlelweni izikhathi eziningana hhayi ukugijimela salon. Qaphela - uma ucindezela isinyathelo of valve uthele uketshezi wokubacindezela. Ngakho-ke, ukuba isitsha sokuqala. Lokhu kungase kube ibhodlela abavamile lamanzi esiphethu. Futhi lokho kwakunganele amabala, sebenzisa hose zenjoloba. Omunye ekupheleni wokudonsa ku valve emoyeni kanye cwilisa yesibili entanyeni ibhodlela. Ekuqaleni, uketshezi ngeke zingena - lokhu kungokwemvelo. Okwalandela pressings inani emoyeni uzokwehla. Cindezela isinyathelo kuze hose akuyona ngamanzi ecacile, khulula Bubbles ketshezi. Lokhu kuzosho ukuthi emoyeni ohlelweni ayisaxhunyanisiwe kwesokunxele. Isikulufa emuva slide valve kanye zokuzivikela iraba cap. Ngenxa yokuba sendaweni yayo, ingxenye njalo uthola amanzi, ukungcola nothuli. Ukuvikela valve kusuka odla, inqobo cap zenjoloba. Hlola ezingeni ngaphansi hood. Uma kudingekile wengeze kubantu abangu. Ngesikhathi kokuhlinzwa, gcina level esiphezulu. Kulesi sigaba, uzotshala bamba inceku isilinda Oise igcwaliswe. I isinyathelo uzothola isitshalo sakho nokugijima.
Ukulungisa bamba inceku isilinda Oise
Ukuze ugweme kokuphenduka ngokwengxenye avuliwe noma avaliwe ukudluliswa, kubalulekile ukuze usethe induku isinyathelo isilinda. Kuze kube yimanje, kuhlanzwe WD-40 nati ukulungisa. Ngakolunye uhlangothi buthaka ilungu locknut, kanye nezinye - ibhawudo silungise isihluthulelo sesibili. Ngosizo uphondo 8 kucinanise ekupheleni pusher. Lapho sivala induku, uyasikrufulula nut Ilokhi ambalwa uphendulela anti clockwise. Isinyathelo esilandelayo adalule isikulufa khulula. Kahle kahle, isitokwe kufanele kusishukumisele ngokuphelele. Ngemva kwalokho silungise ukusonta Ilokhi nut ngaleyo ndlela silondoloze unhlangothi egcwele uMbhalo. Kule nqubo ukulungiswa sekuphelile. Kuyaphawuleka ukuthi izakhi ezintsha ukwenza lo msebenzi akudingekile. Nokho, uma isetshenziswa Kit, kuhle ukuba uhlole unhlangothi khulula. Manje, ahlukahlukene ukushelela nceku inkosi disk azokhishwa. Ngoba noma yisiphi isenzo ne izakhi elihlangana ungakhohlwa ukumpompa ke.
Ukuze bamba babekhonza iminyaka isikhathi eside ngangokunokwenzeka, ulandele asalile ketshezi ezingeni ohlelweni. Ngemva kweminyaka engu-2 noma 50,000 amakhilomitha kufanele akhanywa bese uthele elisha. Ngemva le nqubo, qiniseka opha ohlelweni. Khumbula ukuthi uketshezi wokubacindezela ubamba umswakama. Ngokuhlehlisa esikhundleni nokugqwala kwakhiwa ohlelweni, okuyinto kunciphisa ukuphila we bamba master isilinda. Gcina yobunzima ka amashubhu, ikakhulukazi ezindaweni lapho ijoyina metal ne injoloba. Kwenzeka ukuthi ayangena impahla noma wagcoba on isondo (uma kuziwa phambili). Lokhu kuyingozi kakhulu, kusukela depressurization kohlelo uzobe ngaphandle bamba bese ushayela endaweni oya kuyo kungenziwa kuphela towed noma amabhokisi gearbox yakhe.
Ngakho esiphethweni kanjani bamba inceku isilinda UAZ, ngibambele njengombonisi yakhe futhi uhlelo futha. Njengoba ubona, neqoqo ubuncane amathuluzi lo msebenzi kungenziwa bebodwa. Ibhajethi ukulungisa ngeke akuvamile afinyelela ruble ayizigidi 1.
Lapho emotweni kukhona Jets kanye abakwenzayo
Welding okokunciphisa umsindo ngezandla
"Yandeks.Koshelek": indlela ukuvula, ukusetshenziswa, kanye nendlela ukuvikela imali yakho
Ukukhetha usofa ndawonye
Indlela ukukhetha indaba for mbumbulu kwezindlu zangasese. olungaphambili lwesonto kuphela